Kwamvulela uMnyango wemali ukuqoqa udoti | Isolezwe
Kwamvulela uMnyango wemali ukuqoqa udoti
intandokazi / 10 January 2019, 12:28pm / PHILI MJOLI
UNKK Nokubonga Mnyango elele phezu kwezigubhu eziqoqwa emiphakathini zidayiswe ukuze ziphinde zisetshenziswe
ABANTU abaningi bayakujabulela ukubizwa ngamagama amahle ahambisana nezikhundla abaziphethe emsebenzini, ikakhulukazi uma beqashwe yizinkampani ezinkulu kodwa owesifazane waseNgwelezane washiya umsebenzi wokuba wumabhalane wakhetha ukuqoqa udoti emigwaqweni.
UNkk Nokubonga Mnyango abanye abambiza ngoBabes Kadoti, uthi akumkhathazi lokhu ngoba vele udoti uyawuthanda futhi akaligqizi qakala iphunga elibi elithaphuka kuwo.
UNkk Mnyango ungumsunguli wenkampani uThando Recyclers, le nkampani uthi ikhuthaza umphakathi ukuthi ungawulahli budedengu udoti, iphinde ukhuthaze wona umphakathi ukuthi uzenzele imali ngokuqoqa udoti osengabuye usetshenziswe ngokuthi uwudayise.
Le nkampani uthi uyisungule ngemuva kokuthi ebone ukuthi kanti udoti uyimali. Lokhu uthi wakubona ngesikhathi ethunywe enkampanini abeyisebenzela ukuthi ayodayisa amaplastiki asesebenzile asetshenziswa yile nkampani ukuhlola ukuthi izingodo ezidayisayo ziswakeme kangakanani, ngo-2014
“Bekungakhethwa ukuthi ngubani othunywa ukuthi ayodayisa oplastiki, ngo-2014 kwathunywa mina, ngathatheka uma ngibona ukuthi kanti udoti unemali ngabuye ngabuza nokuthi kungani bewuthenga bangitshela ukuthi bakwenzela ukuthi kongiwe imvelo.
“Uthando lwami lokonga imvelo lwaqala lapho, angibange ngisachitha sikhathi ngaqala ngaqoqa udoti ngawubeka egcekeni lami ngaphambi kokuthi ngiye emsebenzini. Kwabaningi ukuqoqa izigubhu, amabhodlela, amathini namaphepha kwakubukeka njengokuhlanya,” kusho yena.
Lo mcabango womakhelwane uthe waqina kakhulu ngesikhathi eseyeka umsebenzi enza lo msebenzi ngokugcwele ngo-2015. Imali ayithola emsebenzini uthe wathenga iveni elidala waliqamba ngokuthi “money maker”.
Ngawo lowo nyaka wangenela umncintiswano owawuhlelwe uMkhandlu uMhlathuze, iResponsible Tourism Challenge, emunxeni oqondene nokuqoqwa kukadoti. Wawina isikali asisebenzisela ukukala udoti, okwamsiza ukuthi avule isikhungo esizothenga amabhodlela, izigubhu namaphepha emphakathini.
“Ngo-2017 kwavuleka elinye ithuba ngangena ngaphansi kohlelo lwakaCoca-Cola Beverages SA (CCBSA) olukhuthaza ukuthi abafundi baqoqe udoti ikakhulukazi izigubhu, amabhodlela namaphepha. Ngathola izikole ezingu-14 engazifaka kulolu hlelo, zenza umsebenzi oncomekayo okwaholela ekutheni ngichonywe uphaphe lwegwalagwala, emncintiswaneni iBusiness Women of the Year ohlelwa yiyo iCCBSA,” kusho yena.